ဦးကိုနီကို ပစ်သတ်ဖို့လာတဲ့ အဓိကတရာခံ လွတ်မြောက် - APANNPYAY
/ ဦးကိုနီကို ပစ်သတ်ဖို့လာတဲ့ အဓိကတရာခံ လွတ်မြောက်
ဦးကိုနီကို ပစ်သတ်ဖို့လာတဲ့ အဓိကတရာခံ လွတ်မြောက်
ဦးကိုနီကို လက်ရှိသတ်တဲ့ တရာခံက ကြေးစားသတ်ခိုင်း တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဦးကိုနီကို ပစ်သတ်တာစောင့်ကြည့်ဖို့ နဲ့ ဦးကိုနီ မသေခဲ့ရင် ထပ်မံပစ်သတ်ဖို့ အဓိက စောင့်ကြည်သူမှာ ဦးကိုနီ သတ်ခံရပြီး တက္ကစီမောင်းနှင်သူတွေ က တရာခံ ၀ိုင်းဖမ်းနေချိန် နောက်ကွယ်မှ သေနတ်နဲ့ ပစ်ပြီးထွက်ပြေးသွားသူ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်. - ဦးကိုနီကို လက်ရှိသတ်ခဲ့တဲ့ တရာခံမှာ မန်းလေးကို မကြာသေးခင် အချိန်ကမှ ခိုင်းစေမှုအရ ရောက်ရှိ နေသူဖြစ်ပြီး နောက်ကွယ်မှ ခိုင်းစေသူ မည်သူ ဖြစ်ကြောင်းကို လက်ရှိတရာခံပင် မသိကြောင်း မမြင်ဖူးကြောင်း ဆိုပါတယ်။ - လတ်တလော ပြန့်နှံနေသည် ဦးကိုနီကို ပစ်သတ်ခဲ့တဲ့ သေနတ်သမား တရာခံ သေဆုံးသွားပြီဆိုသည် သတင်းမှာ လုံးဝမဟုတ်ပါ။
ပေးပို့ သူ ( ဘကောင်း )
ဦးကိုနီကို ပဈသတျဖို့လာတဲ့ အဓိကတရာခံ လှတျမွောကျ
ဦးကိုနီကို လကျရှိသတျတဲ့ တရာခံက ကွေးစားသတျခိုငျး တယျလို့သိရပါတယျ။ ဦးကိုနီကို ပဈသတျတာစောငျ့ကွညျ့ဖို့ နဲ့ ဦးကိုနီ မသခေဲ့ရငျ ထပျမံပဈသတျဖို့ အဓိက စောငျ့ကွညျသူမှာ ဦးကိုနီ သတျခံရပွီး တက်ကစီမောငျးနှငျသူတှေ က တရာခံ ၀ိုငျးဖမျးနခြေိနျ နောကျကှယျမှ သနေတျနဲ့ ပဈပွီးထှကျပွေးသှားသူ ဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ. - ဦးကိုနီကို လကျရှိသတျခဲ့တဲ့ တရာခံမှာ မနျးလေးကို မကွာသေးခငျ အခြိနျကမှ ခိုငျးစမှေုအရ ရောကျရှိ နသေူဖွဈပွီး နောကျကှယျမှ ခိုငျးစသေူ မညျသူ ဖွဈကွောငျးကို လကျရှိတရာခံပငျ မသိကွောငျး မမွငျဖူးကွောငျး ဆိုပါတယျ။ - လတျတလော ပွနျ့နှံနသေညျ ဦးကိုနီကို ပဈသတျခဲ့တဲ့ သနေတျသမား တရာခံ သဆေုံးသှားပွီဆိုသညျ သတငျးမှာ လုံးဝမဟုတျပါ။
ပေးပို့ သူ ( ဘကောငျး )